Cartoni က 'WinaSDS Tripod' ပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိသူများကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Cartoni ကို 'တစ်ဦး SDS tripod အနိုင်ရမည်ဟု' 'ပြိုင်ပွဲမှဆုရရှိသူကိုကြေညာ
အဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ entries တွေကိုဆွဲငင်
ရောမမြို့, အီတလီ (သြဂုတ်လ 16, 2019) - Cartoni, ပရီမီယံကင်မရာထဲမှာအီတလီခေါင်းဆောင်ထုတ်လွှင့်, ရုပ်ရှင်နဲ့လိုလားသူဗီဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အထောက်အပံ့ပြိုင်ပွဲ '' တစ်ဦး SDS tripod အနိုင်ရမည်ဟု '' ၏ဆုရရှိသူဆင်နွှဲဖို့ဂုဏ်ယူသည်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ဥရောပ, အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ entries တွေကိုဆွဲငင်။
"Cartoni မှာလူတိုင်း၏ကိုယ်စားတွင်ကျနော်တို့ပါဝင်ဘို့လူတိုင်းကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်," ကရှင်းပြသည် Elisabetta Cartoni, Cartoni ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်စီအီးအို။ "ကျနော်တို့ကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဘယ်လိုလူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂီယာအသုံးပြုနေသည်ကိုတွေ့မြင်ဝမ်းသာပီတိကြသည်! ဤမျှလောက်များစွာသောအကြီးအတင်ပြချက်များနှင့်အတူကျနော်တို့ထိပ်ဆုံးခုနစ်ခုတင်ပြနိုင်ရန်ဆုချဲ့ထွင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကြောင်းကင်မရာအော်ပရေတာကသူတို့ကိုသူတို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရိုက်ချက်များကိုဖမ်းယူဖို့လိုအပ်အမြန်နှုန်းပေးသောကျွန်တော်တို့ရဲ့မူပိုင် SDS tripod နည်းပညာ, နှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲသေကြပြီကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည်။ "
on-the-go ကင်မရာအော်ပရေတာများအတွက်ဒီဇိုင်း, အ SDS tripod ကင်မရာအော်ပရေတာကို set up ကာလက်ငင်းမှာသူတို့ရဲ့ tripod ခေါက်ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းမူပိုင်ခွင့် tripod ခြေထောက်အစုတခုဖြစ်ပါတယ်။ သုံး SDS tripod ပထမလေးဆုဆုရရှိသူမှချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်, လေးယောက်ပြေးသမား-Up တစ် Cartoni Monopod ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။
A Cartoni အာရုံစိုက် 12 SDS tripod စနစ် ဝါရင့်ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်မှချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် ဒို Ramirez (ကယ်လီဖိုးနီးယား) သူကား, 13 feature ကိုရုပ်ရှင်ပေါ် 300 ကြော်ငြာနှင့်ဂီတဗီဒီယိုနှင့်ရာသီမူးယစ်ဇာတ်လမ်းတွဲများ 4-7 တစ်ခုမှာထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။
ဒုတိယကင်မရာလက်ထောက်ငါပြန် 2006 အတွက် Cartoni အတူလုပ်ကိုင်စတင်ခဲ့ပြီးအဖြစ် "Cartoni, ငါ့ပထမဦးဆုံးမေတ္တာတော်နှင့်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ငါ Cartoni စနစ်ကဘယ်လိုအစိုင်အခဲ, ထိရောက်သောနှင့်အကျိုးရှိစွာတွေ့ရှ။ အဆိုပါ C20 / C30 အံ့သြဖွယ်အကြီးအကဲများဖြစ်ကြသည်။ ယခုမှာငါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဦးခေါင်းဖြစ်သော, အ Maxima သုံးပြီးခဲ့ကြရတယ်။ အခုတော့ DP နှင့်တစ်ဦးငှားရမ်းအိမ်၏ပိုင်ရှင်အဖြစ်, ငါ့ပထမဦးဆုံးခေါ်ဆိုခ Cartoni အကြီးအကဲများခဲ့, "Ramirez ကပြောပါတယ်။
တစ်ဦးကအာရုံစိုက် 8 SDS System ကိုမှချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် Kent Anderson က (တောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်).
"ငါသည်ပုံမှန်အားရှုခင်းများ, တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်နိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမှုဖမ်းယူ, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ခရီးသွား-based အကြောင်းအရာနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအိမ်ပြင်ဖြစ်ခြင်း shoot ။ အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးဂီယာခက်ခဲတဲ့တည်ဆောက်အခါတိုင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်စွယ်စုံဖြစ်ပါတယ်။ ငါစပ် DSLR ကြောင်းတကယ်ပဲကောင်းစွာဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုကနှစ်ဦးစလုံးကိုဖမ်းယူမယ့်ကြိုက်တယ်။ မကြာသေးမီကငါ Lumix GH5 သုံးပြီးခံစားင့်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်အားကဗီဒီယိုကအလုပ်အတွက်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Smallrig လှောင်အိမ်နှင့် SmallHD နှင့်အတူအကြံအဖန်ကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်အလျင်အမြန်ပဲဓာတ်ပုံရိုက်ချအဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်နိုင်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ခဲ့ပြီးပြီ Cartoni အာရုံစိုက် tripod နီးပါးဆယ်နှစ်အဘို့နှင့်ငါနေဆဲတိုင်းတစ်ခုတည်းရိုက်ကူးအပေါ်ဆောင်ကြဉ်းဂီယာ၏တစ်ခုတည်းသောအပိုင်းအစရဲ့ "Anderson ကပြောပါတယ်။
တစ်ဦးအပိုဆောင်း 8 SDS System ကိုအာရုံစူးစိုက် ဟောင်းတဦးကရေဒီယိုဒီဂျေကော်ပိုရေးရှင်းလှည့်ဖို့ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ဖရန့်ဝီလိုဇာနို (Los Angeles မြို့ကယ်လီဖိုးနီးယား) ။
"ကိုယ့်ကိုယ့်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုကိုချစ်။ ငါသည်လမ်းခရီးတလျှောက်တွင်နေရာသစ်နှင့်အကူအညီနဲ့လူတွေကိုခရီးသွားလာခြင်းနှင့်တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ငါတခြားသူတွေနဲ့သူတို့အတှေ့အကွုံမြား "ဝေမျှ" လို။ ငါသိပ်ငါ၏အကင်မရာများကိုချစ်ဘာဖြစ်လို့ရဲ့စဉ်းစားပါ။ ငါအိမ်ပြန်နေရှည်လျားသောလမ်းပေါ့အခါ, ငါယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ကြောင်းဂီယာရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါ Cartoni tripod ကိုချစ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ငါ 2004 ကတည်းကသူတို့ကိုသုံးပြီးခဲ့တာကြောင့်အစဉ်အမြဲငါကြိုက်တတ်တဲ့ set-up ခဲ့ပါတယ်။ ဤအသောနေရာများအချို့ကိုငါပြန်လာမယ့်အခွင့်အလမ်းရဖို့ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ညာဘက်ဖြစ်တယ်ရဲ့ဒါကြောင့်ဖွင့်, "ဝီလိုဇာနိုကပြောပါတယ်။
SDS tripod ခြေထောက်တစ် set ကိုဒူဘိုင်း-based အာရုံစိုက် 18 ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်မှချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် Issam Saadane (ဒူဘိုင်း, ယူအေအီး) ။
"တစ်ဦးရိုက်ကူးစဉ်အတွင်း, ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးတစ်ဦး Cartoni tripod သုံးပြီးခဲ့, ငါအရည်အသွေးနှင့်၏ finish ကိုအတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။ သုံးရက်အကြာမှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး Cartoni tripod တယ်။ Plus အားငါအမှတ်တံဆိပ်ထဲကနေတူးစင်၏ကျယ်ပြန့်ချစ် "Saadane ကပြောပါတယ်။
တစ်ဦးက Cartoni Monopod မှချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် Keaton Bowlby (ကာလီဖိုးနီးယား), Bryan ရွိုင်း (ကနေဒါ) နှင့်က Mathieu Cowan (ကနေဒါ) ။
အဆိုပါ SDS tripod အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, IBC 2019, Booth 12.E30 မှာ Cartoni join ။ ကုဒ် 4582 အသုံးပြု. အခမဲ့ Register ။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMeida Cartoni ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IBC 2019 manios ဒစ်ဂျစ်တယ် Manios ဒစ်ဂျစ်တယ် & ရုပ်ရှင်ပွဲတော် စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း tripod ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း 2019-08-16
ယခင်: နွေရာသီ 2019 ရဲ့အကြီးမားဆုံးရုပ်ရှင်ပွဲတော်တပတ်ရစ် Blackmagic ဒီဇိုင်းဦးလွတ်မြောက်
နောက်တစ်ခု: ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း ROOM တွင် International